ဖြည်းညှင်းစွာသက်ရောက်အသုံးပြုခြင်းအရက်သို့မဟုတ် Denatured အီသနောသန့်ရှင်းစေ
Denatured အရက်မသောက်ရမှအဆိပ်အတောက်ဖြစ်ပြီးအချို့သောဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်များသို့မဟုတ်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မသင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။ သင်လိုအပ်ခဲ့လျှင် စင်ကြယ်သောအီသနော (CH3CH2OH), သငျသညျကို အသုံးပြု. denatured, ညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်ညစ်ညူးအရက်သေစာသန့်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ် ပေါင်းခံ ။ ဒီနေရာတွင်ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
100-mL ထုထည်ကြီးမားသောဘူး သို့မဟုတ်ဘွဲ့ရဆလင်ဒါ
(ထိုရေစက်အရက်ကိုလက်ခံရရှိရန်သို့မဟုတ်အခြားကွန်တိန်နာ,) 250-mL beaker
hotplate သို့မဟုတ်အခြား flameless အပူအရင်းအမြစ်ကို (အီသနောစတငျခဲ့သညျရှောင်ရှားရန်)
200-mL ညစ်ညူးအီသနော (ဥပမာ 70% denatured အရက်)
သင်တစ်ဦးပေါင်းခံယန္တရားရှိသည်မဟုတ်သို့မဟုတ်အခြားတဦးတည်းတူအဘယ်အရာကိုသေချာမသိကြဘူးလျှင်, ငါအဘို့အညွှန်ကြားချက်များ တဦးတည်းလုပ် ။
ပေါ်တွင်တင် သင့်လျော်သောလုံခြုံမှုကိုဂီယာ ကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး, လက်အိတ်များနှင့်အကာအကွယ်အဝတ်အစားအပါအဝင်, ။
အဆိုပါထုထည်ကြီးမားသောဘူးသို့မဟုတ်ဘွဲ့ရဆလင်ဒါအလေးချိန်နှင့်တန်ဖိုးမှတ်တမ်းတင်။ ဒါဟာသင်ကတွက်ချက်ဖို့ဂရုစိုက်လျှင်သင်, သင့်အထွက်နှုန်းဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးပါမည်။
ယင်းမှအရက်၏ 100.00 mL Add ထုထည်ကြီးမားသောဘူး ။ အဆိုပါဘူးပေါင်းအရက်အလေးချိန်နှင့်တန်ဖိုးမှတ်တမ်းတင်။ အခုဆိုရင်, သင်သည်ဤတန်ဖိုးကိုထံမှဘူး၏ဒြပ်ထုနုတ်လျှင်, သင်သည်သင်၏အရက်၏ဒြပ်ထုကိုသိပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ သိပ်သည်းဆ သင့်ရဲ့အရက်၏ အသံအတိုးအကျယ်နှုန်းအစုလိုက်အပြုံလိုက် ပမာဏ (100.00 mL) ကခွဲဝေအရက်၏ဒြပ်ထု (သင်ရုံရရှိသောနံပါတ်) ဖြစ်သော။ သငျသညျယခု g / mL အတွက်အရက်၏သိပ်သည်းဆကိုငါသိ၏။
စည်းဝေး သည့်ပေါင်းခံယန္တရား ။ အဆိုပါ 250-mL beaker သင့်ရဲ့လက်ခံသောတန်ဆာဖြစ်၏။
အဆိုပါ hotplate အပေါ် Turn နှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့အနာစိမ်းဖို့အီသနောအပူ။ သင်ပေါင်းခံယန္တရားအတွက်သာမိုမီတာရှိသည်ဆိုလျှင်, သင်အပူချိန်တောင်တက်မြင်ရပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့ကအီသနော-ရေငွေ့၏အပူချိန်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတည်ငြိမ်။ သင်ကရောက်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်, အပူချိန်ဟာတည်ငြိမ်တန်ဖိုးကိုကျော်လွန်ဖို့ခွင့်မပြုပါဘူး။ အပူချိန်ကိုထပ်ကိုတက်မှစတင်သည်ဆိုလျှင်, ကအီသနောဟာပေါင်းခံရေယာဉ်အနေဖြင့်သွားပြီဆိုလိုသည်။ ဒါကြောင့်အစမှာကွန်တိန်နာအားလုံးကိုမထိုက်မတန်မပါလျှင်ဤအချက်မှာ, သငျသညျ, ထိုညစ်ညူးအရက်ပိုမိုပေါင်းထည့်နိုင်ပါတယ်။
သင်လက်ခံ beaker အတွက်အနည်းဆုံး 100 ဦး mL ကောက်ယူမှီတိုငျအောငျပေါင်းခံ Continue ။
အဆိုပါဖြည်းညှင်းစွာသက်ရောက် (သင်စုဆောင်းအရည်) အားအအေး Allow အခန်းအပူချိန် ။
ဒီအရည်၏ 100.00 mL လွှဲပြောင်း ပုထုထည်ကြီးမားသောဘူးသို့ , အဘူးအပေါင်းအရက်အလေးချိန်, (အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောထံမှ) ကိုဘူး၏အလေးချိန်နုတ်, နှင့်အရက်၏ဒြပ်ထုမှတ်တမ်းတင်။ g / mL ၌သင်တို့၏ဖြည်းညှင်းစွာသက်ရောက်၏သိပ်သည်းဆ get 100 အားဖြင့်အရက်၏ဒြပ်ထု Divide ။ သင်သည်သင်၏အရက်၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခန့်မှန်းရန်တန်ဖိုးများစားပွဲတစ်ခုဆန့်ကျင်သည်ဤတန်ဖိုးကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ၏သိပ်သည်းဆ အခန်းအပူချိန်ဝန်းကျင်စင်ကြယ်သောအီသနော 0,789 g / mL ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျချင်လျှင်, သင်က၎င်း၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တိုးမြှင့်ဖို့အခြားပေါင်းခံမှတဆင့်ဒီအရည်ကို run နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျတတိယပေါင်းခံကျင့်ကိုကျင့်လျှင်သင်တစ်ဦးဒုတိယအကြိမ်ပေါင်းခံနှင့်အတူနိမ့်အထွက်နှုန်းနှင့်ပင်လျော့နည်းနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အချို့အရက်တိုင်းပေါင်းခံနေစဉ်အတွင်းပျောက်ဆုံးသွားသည်စိတ်ကိုထားပါ။ သငျသညျကို double သို့မဟုတ်သင့်အရက်အနှစ်ချုပ်သုံးဆလျှင်, သင်က၎င်း၏သိပ်သည်းဆကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်ကွပ်ထားတဲ့တူညီတဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးပြီး၎င်း၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ် ပထမဦးဆုံးပေါင်းခံဘို့ ။
အီသနောဟာပိုးသတ်ဆေးအဖြစ်စတိုးဆိုင်၏ဆေးဆိုင်ကဏ္ဍများကိုရောင်းချသည်။ ဒါဟာ ethyl အရက်, အီသနောသို့မဟုတ် ethyl ပွတ်နယ်အရက်ကိုခေါ်နိုင်ပါသည်။ အတှကျအသုံးပွုအရက်၏နောက်ထပ်ဘုံ type ကို အရက်ပွတ်နယ် isopropyl ရက်သို့မဟုတ် isopropanol ဖြစ်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကားအယ်လ်ကိုဟောရှိ ကွဲပြားခြားနားသောဂုဏ်သတ္တိများ (အထူးသ isopropyl အရက်အဆိပ်သင့်ဖြစ်ပါတယ်), ဒါကြောင့်သင်လိုအပ်သည့်တဦးတည်းအရေးလျှင်, တပ်မက်လိုချင်သောအရက်တံဆိပ်ပေါ်တွင်စာရင်းဖြစ်ပါတယ်သေချာပါစေ။ gels သန့်ရှင်းရေးလက် ကိုလည်းမကြာခဏအီသနောနှင့် / သို့မဟုတ် isopropanol ကိုအသုံးပြုပါ။ အဆိုပါတံဆိပ်အား "အောက်တွင်အသုံးပြုသည်အရက်၏ထားတဲ့အမျိုးအစားစာရင်းပြုစုသင့်တယ် တက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းများ " ။
denatured အရက် Distilling မေလဓာတ်ခွဲခန်း application များအတွက်အလုံအလောက်အညစ်အကြေးကိုဖယ်ရှားပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ်သန့်စင်ခြေလှမ်းများ activated ကာဗွန်ကျော်အရက်ဖြတ်သန်းပါဝင်သည်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါပေါင်းခံ၏အချက် drinkable အီသနောရရှိရန်လျှင်ဤသည်အထူးသဖြင့်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ သုံးပြီးသောက်ရရန်အလွန်သတိထားထားတဲ့ရေသန့်အီသနော Be denatured အရက် တစ်အရင်းအမြစ်အဖြစ်။ အဆိုပါ denaturing အေးဂျင့်ရိုးရှင်းစွာအရက်ကိုခါးစေရန်ရည်ရွယ်ထို့အပြင်ခဲ့လျှင်ဤသန့်စင်ချောပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အဆိပ်တ္ထုများဟာအရက်ထည့်သွင်းခဲ့ကြပါလျှင်, ညစ်ညမ်းတဲ့အပြောင်ဒီဂရီအတွက်ရေစက်ထုတ်ကုန်များတွင်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါသည်။
ညစ်ညမ်းတဲ့ရှိခဲ့လျှင်ဤသည်အထူးသဖြင့်ဖွယ်ရှိသည် နီးကပ်ကြွက်ကြွက်ဆူမှတ် ဟာအီသနော၏ရန်။ သငျသညျကောက်ယူကြောင်းအီသနော၏ပထမဦးဆုံး bit နဲ့နောက်ဆုံးအသောအဘို့ကိုပယ်ခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစတင်းကျပ်စွာပေါင်းခံ၏အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ကူညီပေးသည်။ ရုံသတိထားပါ: ရေစက်အရက်ရုတ်တရက်မဖြူစင်ပါ! တောင်မှစီးပွားဖြစ်အီသနောနေဆဲသည်အခြားဓာတုပစ္စည်းများသဲလွန်စများပါဝင်သည်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
သင်မည်သို့ရေထဲကနေဆား Remove သလား?
သိပ္ပံကို Magic Tricks
Fitzroy ရဲ့မုန်တိုင်း Glass ကို Make လုပ်နည်း
Valentine Day ကိုဓာတုဗေဒ
အပူပိုင်းရေခဲပြင်ပူဖောင်း Make ရန်ကဘယ်လို
DIY ဧရာ Borax crystal ဟာ
အဆိုပါဂစ်တာ Capo မှတစ်ဦးက Beginner ရဲ့လမ်းညွှန်
Truman Capote ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
OpenCPN Navigator Software ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
လူအားလုံးတို့သည် ABATE အဖွဲ့အကြောင်း
ကို 'Bunny-Hop' 'လုပ်ဖို့ဘယ်လို
Beginners များအတွက် Reading နားလညျမှု - ငါ့ရုံး
ရှေးဟောငျးဂရိကာ - တစ်ခုကနိဒါန်း
သင်က Medical School ကျောင်းတွင်တှငျအဘယျ Classes ရဲ့ကိုယူတော်မူမည်လော
ဆောင်းရာသီမိုးလေဝသအတွက်နွေးထွေးတဲ့နခွေများအတွက်5Toasty သိကောင်းစရာများ
Bertrand - သက္ကရာဇ်အဓိပ္ပာယ်နှင့်မိသားစုသမိုင်း
Shanidar ဂူ (အီရတ်) - Neanderthal အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်သင်္ဂြိုဟ်